सञ्चार माध्यमको बदलिँदो चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
सञ्चार माध्यमको बदलिँदो चुनौती
सरकार, कर्मचारी, नीति निर्माता, सञ्चार माध्यम र विज्ञापन व्यवसायीले आफ्नो दायराबारे बुझ्न र बुझाउन आपसी बहस गर्न जरुरी छ ।
माघ ९, २०७५ महेश स्वाँर
काठमाडौँ — पछिल्ला २५ वर्षमा नेपाली सञ्चार माध्यमले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपाली सञ्चार माध्यम विकासको नयाँ दौडमा प्रवेश गरेसंँगै नयाँ–नयाँ मिडिया प्लेटफर्म थपिने क्रम जारी छ । डिजिटल मिडियाको आगमनसँगै नेपाली सञ्चार माध्यम नवयुगमा प्रवेश गरेको छ ।
अब समाचारलाई पाठक तथा दर्शकले हातमा भएको मोबाइलबाट जुनसुकै बेला जहाँ पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्नसक्ने भएका छन् । यसले समाचारको पहुँच सरल तथा छिटो बनाइदिएको छ । डिजिटलाइजेसनको वृद्धिसँगै समाचारको सत्य–तथ्यमा प्रश्न उठाउने क्रम पनि सुरु भएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी पत्रपत्रिका, ३० भन्दा बढी टिभी च्यानल, ६ सय ५० भन्दा बढी एफएम रेडियो र अनलाइन न्युज पोर्टल छन् । सञ्चार माध्यम खोल्ने क्रमको तीव्रतासँगै यसको सञ्चालन खर्च पनिबढ्दो छ । नेपालमा सञ्चार माध्यमको मुख्य आम्दानीको स्रोत विज्ञापन हो । यसले सञ्चार माध्यमको आम्दानीमा ७० देखि ८० प्रतिशत ओगटेको छ । बदलिँदो सञ्चार सम्मिश्रण र बढ्दो प्रतिस्पर्धाको युगमा सरकारी नीति तथा आर्थिक नीतिका कारण विज्ञापन बजार घट्ने दर बढ्दो छ ।
देशको चौथो अंग तथा नेपाली जनताको सच्चा पहरेदार भनेर चिनिने सञ्चार माध्यमहरू देशको बदलिँदो परिस्थिति तथा सरकारको अदूरदर्शिताका कारण बन्द हुने जोखिममा छन् । देशको राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिमा आउने सानो परिवर्तनले परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । हालका दिनमा नेपाली सञ्चार माध्यमले भोगिरहेका मुख्य चुनौती यस्ता छन् ।
१. सरकारी नीति
नेपाल सरकार तथा यसका कैयन निकायहरू आज पनि आफ्नो सूचना प्रवाहका लागि सरकारी सञ्चार माध्यममात्र रोज्छन् । आफ्नो सूचना प्रवाहमा निजी सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्दा सरकारी कार्यालयहरूलाई अख्तियारको डर हुन्छ । उनीहरू निजीको साटो सरकारी माध्यम छान्छन् । सरकारले हरेक साल बजेटमा सरकारी सञ्चार माध्यम सञ्चालनको लागि ठूलो बजेटछुट्याउँछ । आज पनि सरकार गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाईआफ्नो भनी अन्य सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साही गर्ने गर्छन् । सरकारको नीति सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने र अन्य सञ्चार माध्यमलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिने खालको छ । सञ्चारमन्त्री आफूलाई सरकारी सञ्चार माध्यमको सञ्चालकका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् ।
२. सरकारी कर्मचारी
राजस्व अनुसन्धानदेखि आपूर्ति, श्रम तथा अन्य कैयन निकाय सञ्चार माध्यममा देखिएका विज्ञापनका आधारमा छापा मार्न आतुर हुन्छन् । कुनै पत्रपत्रिकामा आएको विज्ञापन देखाउँदै सोध्छन्, ‘विज्ञापन गर्ने खर्च कहाँबाट आयो ?’ जसको फलस्वरुप संस्थाहरू विज्ञापन गर्न डराउँछन् । सरकारी कर्मचारीहरू वस्तु तथा सेवा प्रदायकको प्रचार–प्रसारलाई फजुल खर्चको रूपमा चित्रण गर्छन् ।
३. सञ्चार माध्यम
खस्कँदो विज्ञापन बजारका कारण विज्ञापनदाता बढी ‘सेगमेन्टेड’ हुनथाले । उनीहरूले लगानीको प्रतिफलका आधारमा आफ्नो विज्ञापन ठूला सञ्चार माध्यममा मात्र राख्न थाले । जसको फलस्वरुप सञ्चार माध्यमले उनीहरूको समाचारलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरी विज्ञापन दिन बाध्य गर्न थाले । विज्ञापनदाताहरूले विज्ञापनको लगानीलाई अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न थाले । सञ्चार माध्यममा आउने धम्कीपूर्ण फोनबाट बच्न व्यावसायीहरूले अन्य उपाय गरीआफ्नो वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरण गर्न थालेका छन् ।
४. विज्ञापन व्यवसायी
पछिल्ला दिनमा विज्ञापन व्यवसायको घट्दो दरमा रहेको वृद्धिदरले विज्ञापन व्यवसायी यो पेसाबाट पलायन हुनथालेका छन् । नयाँ व्यवसायीहरूको आगमन सीप तथा दक्षताको आधारमा भन्दा पहुँच र शक्तिको आधारमा भएको पाइन्छ । यी व्यवसायीलाई ‘क्रिएटिभ माइन’का रूपमा विश्व बजारमा चिनिन्छ, तर पछिल्लो स्थितिमा व्यवसायको खस्कँदो अवस्था तथा कम मुनाफाका कारण यी व्यवसायीआफ्नो लगानी र दक्षतालाई अन्य व्यवसायतिर लगाइरहेका छन् ।
५. सञ्चार तथ्यांकको अभाव
विश्व बजारमा दर्शक, पाठक, श्रोताले समाचार माध्यमको प्रयोग कति र कुन बेला गर्छन् भन्ने जानकारी त्यहाँका कैयौं निकायले दिने गर्छन् । दर्शकको संख्या पत्रिकाको वितरण र स्रोताको संख्याको आधारमा समाचार माध्यममा राख्ने विज्ञापनको मूल्य तय गर्ने गरिन्छ ।
छिमेकी देश भारतमा पत्रपत्रिकाको मूल्यांकनका लागि ‘एडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन’ र टेलिभिजनको मूल्यांकनका लागि ‘ब्रोडकास्ट अडियन्स रिसर्च काउन्सिल इन्डिया’को तथ्यांक प्रयोग गर्ने गरिन्छ । सूचनाको अभावमा सञ्चार माध्यमको विज्ञापन मूल्य निर्धारण नहुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
सरकार, कर्मचारी, नीति निर्माता, सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन व्यवसायीले आफ्नो दायराबारे बुझ्न र बुझाउन समयमै आपसी बहस गर्न जरुरी छ । आजको दु्रत दरमाघट्दो विज्ञापन बजारलाई समयमै सहीदिशा नदिए सञ्चार माध्यम कमजोर बन्न पुग्छन् । त्यसबाट नेपाली लोकतन्त्रलाई पर्ने असरबारे सोच्नुपर्छ ।
लेखक कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका एजीएम हुन् ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:१४
सत्य निरूपणमा संशय
ऐनको जटिलता, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीको अभावले काममा कठिनाइ एउटा पाटो हो । पाएको बजेट र क्षेत्राधिकारभित्र केही परिणाममुखी काम गर्न पनि सकिएन ।
माघ ९, २०७५ मञ्चला झा
काठमाडौँ — २०७१ माघ २७ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो २६ गते सकिँदैछ । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृत्तिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । आयोगको दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिनलाग्दा संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि घनिभूत भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबारे यतिबेला पीडित, मानव अधिकारकर्मीले मात्र नभएर राजनीतिक दल र सरकारले समेत चासो राखेको बुझिन्छ । चार वर्षमा आयोगले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको भनी पुनर्गठनको माग पीडित पक्षबाट उठिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको हविगत यस्तो किन भयो भन्ने विषयमा यहाँ संक्षेपमा राख्न चाहन्छु ।
आयोग गठनको सकस
नेपालको शान्ति निर्माण प्रक्रियाले विश्वव्यापी रूपमा मानक कायम गरेको छ । त्यसै अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठनप्रति विगतमा राजनीतिक दलहरू उदासीन रहे । हुन त द्वन्द्वबाट गुज्रिएका करिब चालीसभन्दा बढी मुलुकमा गठन भएका यी र यस्ता आयोग गठन प्रक्रिया सहज देखिँदैन । नेपालको द्वन्द्वको प्रकृत्ति फरक छ ।
शान्ति निर्माण प्रक्रियामा दलहरूले साझा हस्ताक्षर गरेर हतियार व्यवस्थापन तथा सेना समायोजनजस्ता कठिन कार्य आपसी सहमतिमा सम्पन्न गरे । तर ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन निकै ढिलोगरी भयो । शान्ति सम्झौतामा जसरी आयोग गठनको प्रावधानलाई लिपिबद्ध गर्न सजिलो थियो, त्यत्ति सहज यसको क्षेत्राधिकार या व्यावहारिक पक्ष हुँदैन भन्ने यथार्थको अनुभूत्ति विस्तारै दलहरूले गर्न थालेका थिए । त्यसैले होला, आयोग नै गठन नगरौँ भन्नेसम्मको मनस्थितिमा समेत दलहरू पुगेको हुनुपर्छ, जसको खुलासा केही महिनाअघि तत्कालीन द्वन्द्वका पक्षधर एक नेताले सार्वजनिक रूपमा गरेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडितलाई यातना दिएको आरोपमा नेपाली सेनाका एकजना कर्णेलको बेलायतमा गिरफ्तार भएपछि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा विश्व्यापी क्षेत्राधिकार लागु हुने तथ्यबाट राजनीतिक दलहरू झस्किए । अनेक रस्साकस्सीपछि आयोग गठनका लागि उनीहरू सहमत भए । बाध्यतावश गठन गरिएका आयोग राजनीतिक दलहरूका निम्ति ‘फेस सेभिङ’ भयो । तर व्यवहारमा यी आयोगप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनीहरूले रुचि देखाएनन् ।
आयोगको आवश्यकता परिपूर्तिमा कुनै पनि सरकारले चासो दिएन । विभिन्न चरणका सरकारको पालामा आयोगलाई सरकारबाट ओठे प्रतिबद्धता प्राप्तिमा कमी भने भएन । आयोग गठनपछिको १४ महिना बितिसक्दा मात्र नियमावली बन्यो । चाहिएको शीर्षक अनुसार बजेट समयमा उपलब्ध हुन सकेन । आयोगको मुकाम कार्यालयमा कर्मचारी अभाव रह्यो ।
आयोगको प्रक्रियागत कामकारबाही अघि बढाउन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिएन । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसला तथा आयोगले ऐनमा देखेको केही व्यावहारिक कठिनाइलाई आंैल्याएर २०७२ पुस १ गते आठबुँदे ऐन संशोधन प्रस्ताव सरकार समक्ष बुझाएको थियो । यस बीचमा संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भयो, तर त्यसले कस्तो रूप लियो, आयोगलाई औपचारिक सूचना प्राप्त भएको छैन । आवश्यक ऐनको अभावले आयोगले चाहेर पनि केही नीतिगत निर्णय लिन सकेन ।
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सामान्य अदालती प्रक्रियाभन्दा भिन्न हुन्छ । अल्पकालीन र अस्थायी रूपमा गठित यस्ता संयन्त्रले समाजमा घटित अप्रत्यासित घटनाको सामूहिक तवरले सम्बोधन गर्छन् । यसप्रति समाज र सरोकारवालाको चासो स्वाभाविक हुन्छ । यी र यस्ता आयोगको सफलतामा पीडित सरोकारवालाको साथ र समर्थन अपेक्षा गरिएको हुन्छ । नेपालमा यी आयोगको गठन प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट र रुष्ट बनेका पीडित तथा सरोकारवालाले न आयोगप्रति अपनत्व बोध गर्नसके, नत आयोगलाई जवाफदेहिता बोध गराउनसके ।
संक्रमणकालीन न्यायिक बहस बेलाबखत मानव अधिकारकर्मी र पीडित सरोकारवालाका लागि मौसमी बहसजस्तो बनेको छ । त्यस्तो बहस या छलफल आयोगभित्र गर्न सरोकारवालाले किन उचित किन ठानेनन् होला ? जुन उद्देश्य र क्षेत्राधिकार लिएर यी आयोग खडा भए, त्यसप्रति सरोकारवालाको जवाफदेहिता खै ? आयोगका कमी–कमजोरी औंल्याई सुधारका लागि सुझाव दिन र सरकार र आयोगबीच सेतुको काम गर्न नचाहनुको पछाडि निहित स्वार्थ र तुष अझै रहेको स्पष्ट छ ।
संक्रमणकालीन न्यायिक विषय नेपालको मौलिक उपज होइन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन गर्नुपरेको हो । अन्य देशमा अभ्यास भइरहेका यस्ता आयोगहरूमध्ये धेरैजसो हाइब्रिड मोडलका छन् ।
हाम्रोमा पाँचैजना नेपाली नागरिक पदाधिकारी हुनु गौरव गर्नुपर्ने कुरो हो । यसको अर्थ विषय–वस्तुमा हामी पोख्त छौं र हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साथ चाहिँदैन भन्ने हैन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सहयोग र साथको आवश्यकता न्यायिक प्रक्रिया टुंगो लगाउनमा अपेक्षित छ ।
यसको मापनको आधार के अर्थात् संवेदनशील कामका लागि गठन गरिएका यी आयोगका लागि कति हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनसक्छ भन्ने विषयमा सरकार र दाता दुवै स्पष्ट हुनुपथ्र्याे । तर अन्य निकायहरूमा जसरी यिनको वर्चस्व छ, त्यही अनुसारको भूमिका आयोगसित पनि खोज्नाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित सम्बन्ध सुखद रहन सकेन । यसमा आयोगले गलत गर्‍यो या सही, नेपाली समाजले विश्लेषण गर्नुपर्छ । यो व्यवहारका कारण दातृ निकायदेखि अधिकारकर्मी र सरोकारवाला लगायतका लागि आयोग आलोचनाको पात्र बन्न पुग्यो ।
आयोगले पीडितको चाहना अनुसार यतिखेरसम्म केही परिणाममुखी काम देखाउन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण आयोगको आन्तरिक विवाद पनि हो । गठन भएको प्रारम्भिककालदेखि सुरु भएको आन्तरिक विवादका कारण आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । जसका कारण आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत प्रयोग गर्न चुक्यो ।
संवेदनशील कामको जिम्मदारी पाए पनि त्यस अनुसार परिपक्वता व्यवहारमा देखाउन नसक्नु, पार्टीगत र पक्षगत कित्तामा बाँडिएर पीडितप्रति सहानुभूति देखाउनु जस्ता आयोगभित्रका कमी–कमजोरीका कारण आयोगले पीडितको विश्वास जित्न सकेन ।
आयोगका लागि उपलब्ध ऐनको जटिलता, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीको अभावले काममा कठिनाइ एउटा पाटो हुनसक्छ । तर पाएको बजेट र ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर पनि केही परिणाममुखी काम गर्नसकेको भए आज पुनर्गठन सम्मको माग उठ्ने थिएन होला । बलात्कार पीडितहरूको उजुरी अनुसन्धान गरी पीडितको पहिचान र घटनाको सत्य स्थापित गरी तत्कालै तिनको परिपुरण सिफारिसमात्र पनि गरेको भए आज आयोगको हविगत यस्तो हुने थिएन होला । तर आयोगले यति साहस पनि देखाउन सकेन ।
आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको आयोगको न परिपुरण नीतिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्यो, नत आयोगले कुनै उजुरी सिफारिस गर्न सक्यो । सातवटै मुकाम गरी साढे तीन हजारको संख्यामा प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेका उजुरीको पनि विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेन । सधैं गोपनीयता र संवेदनशीलताको मात्र मन्त्रणा जपिरहेको आयोगले कम्तीमा वर्षेनि श्वेतपत्र जारी गरी जनसमक्ष वास्तविकता उजागर गरेको भए यति अवगाल सुन्नुपर्ने थिएन ।
अन्त्यमा, यतिखेर आयोग पुनर्गठन या विघटनभन्दा पनि म्याद थपको प्रबल सम्भावना छ । आयोगमा परेको ६३ हजार हाराहारीको उजुरीलाई धरापमा पारी बीच बाटोमै आयोगलाई विघटन गर्नु खतरनाक अवस्था निम्त्याउनु हो । यसको संकेत केही महिना यतादेखि स्पष्ट देखिन्छ । तर यथास्थितिमा म्याद थप गर्दै जानु समस्याको समाधान हैन भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूले राख्नैपर्छ ।
चार वर्षअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला र आयोगले दिएका सुझावलाई समेटी न्युनतम साझा सहमतिमा पुगेर ऐन संशोधन गरेको भए संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि यो विन्दुमा पुग्ने थिएन । अफसोच, यसको समय जति लम्बिँदैछ, त्यत्ति आन्तरिक र बाहिरी महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएको देखिन्छ । बाहिर नदेखिए पनि आयोगभित्र दिनदिनै आउने गरेका द्वन्द्वकालीन पक्षहरूको असन्तुष्टिका अवशेषहरूको बाछिटा डरलाग्दो छ । यसले अगामी दिनमा सत्य निरूपणको कार्यलाई कति अन्योलमा पुर्‍याउने हो, अनुमान गर्न कठिन छ ।
लेखक सत्य निरूपण तथा मेलमिलापआयोगकी सदस्य हुन् ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:१२
थप केही विचारबाट
हातहातमा स्यानिटरी प्याड
सरकारलाई ढाँटको सहारा
छौंडा सूत्रको प्रयोग
सम्पादकीय असार २६, २०७६
अमेरिकी लेखक नर्म्यान कजिनले सही भनेका छन्– पुस्तकालय विचारको प्रजनन केन्द्र हो । पुस्तकालय पर्व घटेको हाम्रै देशको इतिहास यसको साक्षी छ । खुला समाजमा पाइला चाल्दै...
युग पाठक असार २६, २०७६
बाँसको अग्लो खुट्टा जोडेर हिँड्ने एकथरी सर्कस–कलाकार हुन्छन् । कठिन अभ्यासबाट पोख्त हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीं दुर्घटना हुन्छ, ती लड्छन् । सर्कस हो, दुर्घटनै भए पनि चलिरहन्छ ।
रमेश के.सी. असार २६, २०७६
सीएनएनका फरिद जकारियाको कार्यक्रम जीपीएसमा बोल्दै बेलायतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले एक्काइसौं शताब्दीको मध्यमा विश्वमा अमेरिका, युरोप, चीन र भारत चार शक्तिहरू सक्रिय रहने बताएका...
चन्द्रकिशोर असार २६, २०७६
संस्कृतिनिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ राममनोहर लोहिया आफ्नो देशको दक्षिणी भूगोलको यात्रामा थिए । नदी, पहाड र जंगललाई असाध्य माया गर्ने उनी त्यस क्षेत्रको कुनै नदीमा नुहाउने तरखर...
अम्बिका गैह्रे असार २६, २०७६
हरेक महिला आफ्नो जीवनकालमा करिब ६.२५ वर्ष महिनावारीसँग जुध्ने गर्छन् । विश्व अभ्यासलाई हेर्दा एक महिलाले सरदर १५,००० वटा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने तथ्यांक देखिन्छ ।
सम्पादकीय असार २५, २०७६
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय दूतावासको पत्र सरकारलाई प्राप्त नभएको भनेर आफ्नो संसदीय दलको बैठकलाई ब्रिफिङ गरेको केही दिन नबित्तै झूटो साबित भएको छ । यसबारे...
किशोर नेपाल असार २५, २०७६
देशमा राजनीतिबारे सोच्ने मानिसको कुनै कमी छैन । राजनीतिले अब ‘कर्पोरेट’ धन्दाको रूप लिइसकेको छ । जसरी धन्दामा लक्ष्मी र उनको वाहन उल्लु (लाटोकोसेरो) को विशद सामाजिक...
वैदेशिक श्रम सुखसयलको भ्रम
डिला संग्रौला असार २५, २०७६
मुलुकको हरेक परिवर्तनमा श्रमिकहरूले अहम् भूमिका खेल्दै आए पनि तिनको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । अहिले पनि श्रमक्षेत्र अस्तव्यस्त नै छ । जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा प्रतिवर्ष अनुमानित...
मेलम्चीमा ढाँटको पहिरो
गौरीबहादुर कार्की असार २५, २०७६
मेलम्ची सुरु भएदेखि विवादले छाडेको छैन । पहिले प्रवेशमार्गको ४६ करोडको ठेक्कालाई ९६ करोडमा दिलाए भनेर शाही शासनकालमा शेरबहादुर देउवालाई भक्तबहादुर कोइराला आयोगले थुनेको थियो । ५...
त्यो ४४ करोड
दीपक रौनियार असार २५, २०७६
संसदीय समितिको निर्देशनपछि अब हाम्रो देशमा ‘आइफा अवार्ड’ नहुने भयो भन्ने लागेको थियो । तर समाचारहरू अनुसार, प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यक्रम गरेरै छाड्ने ‘दृढता’ व्यक्त गर्नुभएछ !...